Buy Toshiba i3 2nd. Nvidia 1GB Laptop in ရန်ကုန် (220,000 Ks) on ipivi
Toshiba i3 2nd. Nvidia 1GB Laptop
Core i3 2nd gen ကိုမှ Nvidia graphic 1GB ပါတယ်နော်.. အလုံးသန့် Toshiba Laptop လေးပါ
#သန့်မှသန့် နက်နက်ပြောင်ပြောင်လေး ဈေးချိုချိုရမယ်
#Toshiba ဆိုတာ quality ပိုင်းစိတ်ချနော် အကြမ်းခံ
#Core i3 2nd gen ကိုမှ Nvidia 1GB ပါတော့
#Design ဆွဲ. Game ဆော့. ရုံးကျောင်းသုံးကြမယ်
#ဈေးလား တန်ချက်လန်ထွက်နေမယ် ၂ခါရဘူးနော်
#ဈေးနူန်း (220,000 ks)
#Hard disk 👉 320GB ပါတယ်
#Graphic 👉 Nvidia 1GB + Intel HD 2GB နဲ့ပါ
#Total graphic 3GB ထွက်မယ်နော်
အမည်:Toshiba i3 2nd. Nvidia 1GB Laptop